Gender Equity Track: Forchọ 500 African Feed-Led Starts
Gender Equity Track: ingchọ 500 African Feed-Led Starts
Home Techmụ nwanyị Tech
in Techmụ nwanyị Tech
Kwa afọ kemgbe afọ 2013, Seedstars na-ama ama ya Asọmpi Ọchịchị ụwa, na-achịkọta mbido ndị kachasị ekwe nkwa site na ahịa 90 na-apụta maka ihe nrite kachasị nke USD 500,000 na ntinye ego.
Ebumnuche nke Gender Equity Track bụ ịchụpụ ohere ọzụzụ gbasara nwoke na nwanyị ma kpalitekwu itinye ego maka ụmụ nwanyị ndị malitere na Sub-Sahara Africa.
Gender Equity Track nwere ihe ndị bụ isi:
Ọzụzụ Lens nke nwoke na nwanyị
Gender Lens itinye ego na ego
Ndabere nke nwoke na nwanyị
A na-eduzi Track Equity Track mgbe nyocha nke 2018 gosiri na site na ngwa 5'000 nke asọmpi Worldstars World natara n'afọ gara aga na 2017, naanị 14% bụ azụmaahịa ndị nwanyị na-eduzi, naanị 3% nke ụmụ nwanyị na-enyocha mere ya n'elu. 10 na mba ọ bụla.
Agbanyeghị, 3% nke ụmụ nwanyị ndị ọchụnta ego na Seedstars World n'uche nọchitere anya ụfọdụ ndị siri ike na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ pọtụfoliyo kacha mma.
Alisée de Tonnac, Onye guzobere na Seedstars, kwuru, sị:
Nke a kpalitere mkpa ọ dị ịghọta nke ọma otu esi akwado inyom founders. Dị ka nwanyị ọchụnta ego n'onwe m, amaara m ihe ịma aka ụmụ nwanyị na-eche ihu mgbe ọ bụla na-abanyekarị na mpaghara azụmahịa nwoke, ọkachasị mgbe ị na-azụlite ego. Anyị na Seedstars na-akpọ ndị niile na-egwu egwuregwu gburugburu ụwa ka ha gbanwee akụkọ wee bido ime ihe na atụmatụ nha anya nwoke na nwanyị, dịka The Gender Equity Track ”.
Otu n'ime ndị bụ isi bụ MEDSAF, nke kacha ibu n'ụwa pan-African pharma-tech ụlọ ọrụ na-eduzi ma na-emetụta usoro ọgwụ site na usoro ịnyefe mgbagwoju anya, nke welitere $ 1.5 nde na ntinye ego ma bụrụ akụkụ nke pọtụfoliyo International nke Seedstars.
“Oge erugo ịgbanwe akụkọ na ị nwere ike ịme ya.”
Ebumnuche nke Gender Equity Track
Ihe niile malitere na 2019 mgbe Seedstars, na mmekorita ya na German Development Agency (GIZ), weputara onye na-anya ụgbọ elu nke Gender Equality Track na ebumnuche nke inye ụmụ nwanyị ndị ọchụnta ego aka site na Sub-Sahara. Mba Afrika ka ha sonye na ozuzu na imeghe ego ohere.
Otu n'ime ihe nchoputa kacha mkpa nke onye ọkwọ ụgbọ elu bụ nwanyị ahụ na-eduzi startups enwekwu ntụsara ahụ n'ihu ụmụ nwanyị na-etinye ego.
N'afọ a, Seedstars weghachitere ọrụ ahụ na Gender Equity Track ma na-atụle usoro a na mba 25 + na mpaghara ahụ na ebumnuche nke ịbawanye itinye ego na ụmụ nwanyị na-amalite.
Na 2021, ebumnuche bụ inwe ike ịme ihe a na 90 + na-apụta ahịa gafee ụwa. Site na 2025, Seedstars zubere iji nweta pọtụfoliyo itinye aka na nha anya nwoke na nwanyị.
Ebumnuche anyị bụ ime ka ụmụ nwanyị 500 duru ya mmalite si Sub-Sahara Africa isonye kwa afọ Seedstars World Asọmpi.
Site na isonye na Seedstars World Asọmpi, mmalite inwe ahaziri ọzụzụ na mentorship anyị mba ụwa nke ndị ọkachamara n'achụmnta ego na ndị isi ụlọ ọrụ, yana inweta ohere inweta USD 500,000 nke nkwụnye ego sitere n'aka Seedstars International ma ọ bụ otu n'ime ndị na-etinye ego na netwọkụ ya
Mbido nwere mmasị nwere ike itinye akwụkwọ Ebe a
Ikike Gender vs Gender Equality
Seedstars kpebiri imeghari oru a site na "Gender Equality" na "Gender Equity Track".
N'ihi gịnị? Ikike nwoke na nwanyị na-ezo aka n'usoro nke izi ezi ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke.
Iji hụ ikpe ziri ezi, usoro na usoro ga-adịkarị ka a ga-akwụ ụgwọ maka mmekpa akụkọ ọdịnala na mmekọrịta ụmụ nwanyị na-egbochi ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke ka ha ghara ịrụ ọrụ na mpaghara egwuregwu.
Inwe nha anya na-eduga nha anya (UNFPA, 2005). Ọ bụrụ na nha anya nwoke na nwanyị bụ njedebe, oke nha nha bụ ụzọ.
Ikike nwoke na nwanyị chọrọ ọ equalụ nhatanha nke ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke nke ngwa ahịa, ohere, akụrụngwa na ụgwọ ọrụ metụtara ọha mmadụ.
Ebe enweghi onodu nwoke na nwanyi, oburu ndi nwanyi ka ewepuru ma obu ghara inwe nsogbu gbasara ime mkpebi na inweta onodu aku na uba na nke mmekorita mmadu.
Ya mere, akụkụ dị oke mkpa nke ịkwalite ịha nhatanha nwoke na nwanyị bụ inye ụmụ nwanyị ikike, na-elekwasị anya n'ịchọpụta na ịkọwa nha anya ikike na inye ụmụ nwanyị nnwere onwe ọzọ ijikwa ndụ ha. (UNFPA, 2005).
N’ịghọta na ịha nhatanha n’etiti nwoke na nwanyị bụ nkwekọrịta dị ogologo oge nke chọrọ mgbalị na-aga n’ihu site na atụmatụ, dị ka inye ụmụ nwanyị ọchụnta ego achụmnta ego, Seedstars kwetara na nha nhatanha nwoke na nwanyị bụ aha kacha mma maka ọrụ ahụ.
Seedstars na okike hara nhatanha
Gender Equity Project bụ otu n'ime ihe atụ pụtara ìhè nke ọrụ Seedstars rụrụ iji gbasie ike na nkwado siri ike ya maka nhatanha nwoke na nwanyị.
Otú ọ dị, Seedstars nwekwara na-akwalite nha anya nwoke na nwanyị n'ụzọ ndị ọzọ:
Seedstars na-anya isi n'ihi ịbụ ebe a na-eme ka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị nwee ohere otu na-eto eto ma na-agba mbọ.
Usoro echiche a metụtara ya esịtidem ego na ịkwalite onyinye, wee gbakwunye na ntinye aka nke ndị ọchụnta ego na mmemme ya na asọmpi ya, yana ndị juri, ndị itinye ego na ndị ndụmọdụ na-arụ ọrụ na azụmaahịa ahụ.
Seedstars kwenyere na ụmụ nwanyị nọ na ebe niile a na-eme mkpebi (tụlee Ruth Bader Ginsburg), na ike ha, karịa ịbụ ezigbo omume, dị oke mkpa maka mmepe na-adigide akụnụba.
Mkpụrụ Seedstars gbara mbọ inye ụmụ nwanyị ike n'ime ụlọ dịka ụlọ ọrụ, yana n'ọrụ ahụ, ọ na-enye ohere inweta agụmakwụkwọ azụmaahịa, ego na netwọk.
Nha nha anya nwoke na nwoke dika ihe putara na Economic Development
Mụ nwanyị ndị ọchụnta ego na-eche ọtụtụ nsogbu ihu na ịnweta ego na oghere ijeri $ ijeri $ 42 (Bank Development Bank).
N'ikwu nke a, n'Africa, na Q1 2020, mmalite nke ụmụ nwanyị na-eduzi nwee ike bulite naanị 3.2% nke ego niile Ihe omume Afrika. Na Q1 2019, ha welitere 5.7% (Bridges Briter).
Dabere na UN, Achọpụtala ụmụ nwanyị na-etinyeghachi ihe ruru 90% nke ego ha ritere na ọkwa onwe ha na ezinụlọ ha na obodo ha ma e jiri ya tụnyere 35% maka ụmụ nwoke.
Ọ bụ ezie na ịha nhatanha n’etiti ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị bụ ihe dị mkpa ebumnuche mmepe, itinye aka na akụ na ụba ụmụ nwanyị sokwa n’ihe akụkụ mmepe na nkwụsi ike.
N'ime akụ na ụba na-eme agadi, ike ndị ọrụ ụmụ nwanyị dị elu nwere ike ịkwalite uto site na mbenata mmetụta nke ndị ọrụ na-adalata.
Ohere di nma diri umu nwanyi nwekwara ike itinye aka na mmepe aku na uba na mmepe aku na uba, imaatu site na ulo akwukwo ndi umuaka (International Monetary Fund).
Nkwupụta McKinsey Global Institute na-achọpụta na enwere ike ịgbakwunye ijeri $ 12 na GDP ụwa site na 2025 site na ịkwalite nha anya ụmụ nwanyị. Yabụ, ịha nhata nwoke na nwanyị bụ nchegbu na-emetụta anyị niile n'ogo obodo dịka o nwere njikọ nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọdịbendị na akụ na ụba.
Ọrụ nwoke na nwoke na nwanyị
Iha nhatanha nwoke na nwanyi abughi nani agha ndi nwanyi; ọ bụkwa okwu metụtara ụmụ nwoke.
Elọ ahịa azụmaahịa nke taa na ahịa ndị na-apụta na-abụkarị ndị nwoke na-achị, nke mere ka ọ dị oke mkpa maka onye ọ bụla iji mee mkpebi siri ike n'ihe gbasara na-enye ike ka azụmahịa ndị nwanyị na-eduzi ma nye ohere ha nha anya na ịha nhatanha na ụmụ nwanyị ọchụnta ego.
Ọ dị mkpa ka ị ghara ileghara ọrụ ụmụ nwoke anya na nha anya nwoke na nwanyị dịka njirimara nwoke na nwanyị na-eche na ọ bụ ndabara.
Norkpụrụ omume na nchepụta echiche nke ịbụ nwoke na atụmanya nke ụmụ nwoke dịka ndị isi, ndị di ma ọ bụ ụmụ nwoke na-eme ka ndị nwoke chọọ ma na-akpụzi omume ha (UNFPA).
Ebe ọrụ nwoke na ọha mmadụ jikọtara ọnụ na ịbụ ndị na-egbo mkpa anụ ụlọ nke ezinụlọ ha, atụmanya ọrụ ụmụ nwanyị metụtara onye na-azụlite ya na onye na-elekọta ya, ihe niile na-eme ka ọ sie ike site na nrụgide ndị ọgbọ na usoro mgbasa ozi.
Anyi choro iwulite eziokwu nke ndi nwoke na nwanyi nwere ikike ime ihe di iche karia ka aturu anya n’aka ha ma nwee ohere iji mezuo ochicho ha.
Otu esi etinye aka
Ma ị bụ nzukọ ma ọ bụ otu onye, ​​enwere usoro ị ga - eme iji mee mgbanwe na ịgbanwe akụkọ ahụ.
Seedstars na-akpọ obodo ya niile na ndị mmekọ ya ka ha kwado ndị mbido ụmụ nwanyị ka ha sonye na Track Equality Track na ịgbasa ozi na netwọkụ ha.
Seedstars na-achọkwa akụkọ ndị na-agwa ahụmịhe ụmụ nwanyị ndị ọchụnta ego ga-ekerịta n'okpuru ọrụ a.
"Gọọmentị kwesịrị ịmalite njem nke ịdị njikere akụ na ụba dijitalụ ma hụ na iwu ndị ha na-eme na-eme ka mgbanwe dijitalụ" - Nkemdilim Uwaje Begho